आजको आफ्नो राशिफल हेरि सच्चा मनले एक शेयर गर्दै बाग्लुङ कालिका माताको दर्शन गर्नुहोस् ।। – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आ उनेछ । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुनेछ । बोलिमा मधुरता छाउनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तीहरुबाट धोका हुन सक्ने योग रहेकोछ ।
Prevकहाँबाट आयो प्रधानमन्त्री पत्नी राधिकासँग यति धेरै सम्पत्ति? भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा कति छ जग्गा ?
Nextटाउको मान्छेको तर शरीर पुरै सर्पको एकदमै डरलाग्दो ,यो कस्तो रोग लाग्यो,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )